हीरा र सुनजडित विश्वको सबैभन्दा महँगो मास्क, मूल्य कति ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
हीरा र सुनजडित विश्वको सबैभन्दा महँगो मास्क, मूल्य कति ?
access_time२०७७ साल श्रावण २६ गते, सोमबार ०५:३३ PM chat_bubble_outline Comments folder_open संसार रोचक​
काठमाडौं । अहिले विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना युगमा, यदि कुनै चीजको उपयोगिता अत्यधिक बढेको छ भने त्यो मास्क हो । नेपालसहित विश्वभर केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार र प्रहरीले पनि जनतालाई सार्वजनिक ठाउँमा मास्क लगाउन अपिल गरिरहेछन् ।
अहिले सजिलैसँग बजारमा १० रुपैयाँदेखि सयौँ रूपैयाँसम्मका मास्कहरू फेला पार्न सकिन्छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ, विश्वको सबैभन्दा महँगो मास्क कति मूल्यवान छ ? विश्वको सबैभन्दा महँगो मास्कको लागत हजारौँ होइन, करोडौँमा छ ।
विश्वको सबैभन्दा महँगो मास्कको लागत करिब साढे सत्र करोड रुपैयाँ रहेको छ । इजरायली ज्वेलरी कम्पनीले उक्त मास्क बनाउन काम गरिरहेको छ र यो नै विश्वको सबैभन्दा महँगो कोरोना भाइरस मास्क हुनेछ ।
उक्त मास्क सुन र हीराले बनेको छ । डिजाइनर आइज्याक लेवीकाअनुसार १८ क्यारेटको सेतो सुनको मास्कमा ३ हजार ६ सय वटा सेतो र कालो हीराले सजाइनेछ । खरिदकर्ताको अनुरोधमा टप रेटेड एन ९५ फिल्टर्स उक्त मास्कमा जडान हुनेछ ।
येवेल कम्पनीका मालिक लेभीका अनुसार उक्त मास्का लागि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा बन्नुपर्ने र विश्वको सबैभन्दा महँगो हुनुपर्ने ग्राहकको माग रहेको छ । यद्यपि, उनले क्रेता अमेरिकामा चिनियाँ व्यापारी भएको भन्दै अन्य पहिचान खुलाउन भने अस्वीकार गरेका छन् ।
लेवीले भने, “सबै कुरा पैसाले किन्न सकिदैन, तर यो कोरोना भाइरसको महँगो मास्क पैसाले किन्न सकिन्छ । यदि व्यक्तिले यसलाई लगाउन र घुम्न चाहान्छ भने यसले खुशी पक्कै दिन्छ ।”